अज चैत १५ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल!जय पाथीभरा माता लेख्नु होस!:: Mero Desh
अज चैत १५ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल!जय पाथीभरा माता लेख्नु होस!
Published on: १५ चैत्र २०७७, आईतवार ०१:४७
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) भौतिक साधन जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ ।श्रम गरीकन मूल्य प्राप्त नहुने समय छ आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् ! अरूका लागि बुद्धि खर्च नुपर्नेछ । गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनु होला । साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) छोटो समयमा उपलब्धि हात पार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधन संग्रह गर्ने मौका छ । नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ !बिना प्रतिस्पर्धा धन लाभ हुनेछ । आर्थिक लाभ हुने दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ । बलजफ्ती गर्दा हानि हुन सक्छ । अन्न लाभ पनि हुनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छआफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । प्र’यत्न गर्दा अप्ठ्यारा काम पनि सम्पादन हुन सक्छन् उपलब्धिले थप उत्साह जगाउनेछ विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्ल हुनेछ । अतिथिको रूपमा सम्मान पाइएला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) दाम, इनाम र प्र’तिष्ठा कमाउने बेला छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । हिम्मत गर्दा पुरुषार्थी काम सम्पादन हुन सक्छ । समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ । बौद्धिक व्यक्तित्व हरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ला ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला । मध्याह्नपछि व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ । रोकिएका काम बन्नेछन् भने नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । व्यवसायमा राम्रै फाइदा हुनेछ । ज्ञान तथा रहस्य पत्ता लगाउन सकिनेछ । तर, स्वास्थ्यमा अलि कमजोरी अनुभूति हुनेछ ।
कन्या ( टो, पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) अरूका काममा महत्व पूर्ण समय बित्न सक्छ ! अवसर वादीहरूले झुक्याउन सक्छन् । आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसि स गर्नेछन् ।घरेलु समस्याले सताए पनि प्रयत्न गर्दा विभिन्न काम सम्पादन हुनेछन् शुभ चिन्तकहरूले सहयोगका लागि तत्परता देखाउनेछन् ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती, तू, ते) हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ प्र’तिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्ने समय छ ईर्ष्या गर्ने हरूको मनोबल कमजोर हुनेछ!व्यवसायमा लगानी बढाउ नु पर्ने समय छ ।कमजोरी लुकाउँदा पछि परिनेछ । रोकिए का काम सम्पादन गर्ने मौका छ । बेसुरमा बचन दिनाले दुख पाइनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । अतिथि का रूपमा सम्मान पाइने समय छ । चिताएको काममा सफलता मिल्ने देखिन्छ । शुभ चिन्तकहरूले आफ्ना योज नामा साथ दिनेछन् । व्यवसायले यात्राको अवसर जुटाउन सक्छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे)ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउन सक्छन् ! स्वास्थ्य पनि कमजोर बन्न सक्छ । आ श्वासन बाँड्नेहरूको भरपर्दा काम बिग्रन सक्छ शक्तिशाली व्यक्तित्वबाटै अवरोध हुने समय छ ।आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । बाध्यतामा अलमलिनु पर्दा चिताएको काम रोकिन सक्छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) मेह नत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा प’रिवर्तन आउन सक्छ । दिन सामान्य नै छ । आम्दानी बढ्नेछ । परिवारजनका आ’वश्यकता पूरा हुनेछन् । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । साँझतिर अव सरवादीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू, से, सो, दा) पहिलेका सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सँग मित्रता बढ्नेछ ! व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ रोकि एका काम बन्नुका साथै विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ ! व्यापारमा मनग्य धन लाभ हुनेछ!शुभ चिन्तक हरूले राम्रो सहयोग जुटाउनेछन् । प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ । चिताएको काम पनि पूरा हुन सक्छ । विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ । सहयोगीहरूको साथ जुट्नाले मनमा उत्साह बढ्नेछ ।